အားကစားပိုက်ကွန်ထဲမှာ steroids အသစ်စမ်းသပ် 260 လက္ခဏာ - သတင်း Rule
အားကစားပိုက်ကွန်ထဲမှာ steroids အသစ်စမ်းသပ် 260 လက္ခဏာ
ဟိုစတီရွိုက်၏ရှေ့မှောက်တွင်များအတွက်တစ်ဦးကအသစ်စမ်းသပ်အတွက်ရလဒ်ဖြစ်ပါတယ် 260 လွန်ခဲ့သည့်အတွက်သိရှိနိုင်ခဲ့ကြလိမ့်မည်သည့်အပြုသဘောဆောင်သောဖြစ်ရပ်များ, အ Cologne Anti-အနှောဓာတ်ခွဲခန်းကနေသုတေသီသောကြာနေ့ကထုတ်ဖော်ပြသ.
အဆိုပါစမ်းသပ်မှုပိုပြီးထိထိရောက်ရောက် Stanozolol detect နိုင်, သူကမှာ 100 ကိုရွှေအနိုင်ရရှိခဲ့ပြီးနောက်ဘင်ဂျွန်ဆင်၏ဆီးနမူနာမှာတွေ့ရတဲ့ Steroid တစ်မျိုး 1988 ဆိုးလ်မြို့အိုလံပစ်, နှင့်ခံတွင်း-Turinabol, ယခင်အရှေ့ဂျာမဏီ၏အနှောအစီအစဉ်မှာအသုံးပြုတဲ့ထုတ်ကုန်ပစ္စည်း.
“အခုတော့ကျွန်တော်တစ်ဦးထက်ပိုသောအထိခိုက်မခံတဲ့နည်းလမ်းကိုရှိသည်နှင့်ကတည်းကကျနော်တို့ပြီးခဲ့သည့်နှစ်နိုဝင်ဘာလအတွင်းကစတင်, ကျနော်တို့အကြောင်းကိုတွေ့ရှိပြီ 180 stanozolol ၏အပြုသဘောဆောင်သောဖြစ်ရပ်များနှင့် 80 ခံတွင်း-Turinabol ဘို့လက္ခဏာ, သောငါတို့သည်ရှေ့တော်၌တွေ့ရှိမဟုတ်ဘူး,” ပညာရှင် Hans Geyer, ဂျာမန်ဓာတ်ခွဲခန်းနှင့်အတူသိပ္ပံပညာရှင်, ဇူးရစ်မြို့ရှိဖီဖာရုံးချုပ်မှာရှင်းလင်းပွဲသို့ပြောသည်.
“ယခုငါတို့ဥပမာအားအဘို့ဤရေရှည် metabolite အဘို့များစွာသောနမူနာ retest နိုင်, ဖက်ဒရယ်လိုလျှင်,” ဟုသူကပြောသည်.
“အနမူနာကနေလာအတိအကျဘယ်မှာကျနော်တို့မသိရပါဘူး. ကျနော်တို့အားကစားသိ, ဒါပေမယ့်ကျနော်တို့နိုင်ငံမသိရပါဘူး. သို့သော် WADA (ကမ္ဘာ့ဖလားဆန့်ကျင်နှောအေဂျင်စီ) အရာအားလုံးကိုသိတယ်။”
Geyer စမ်းသပ်ခင်မှာသူတို့တစ်နှစ်လျှင်ခံတွင်း-Turinabol ၏တစ်ခုတည်းအပြုသဘောအမှုရှိသည်မဟုတ်ခဲ့ပါကပြောသည်.
“ရုတ်တရက်ကျွန်တော်ပိုပြီးထိခိုက်မခံတဲ့ကြောင်းအသစ်တခုနည်းလမ်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေရန်နှင့်ယခုကျွန်တော်တစ်ဦးကြီးမားသောတိုးများ. ဒီဖြစ်နိုင်သည်ဟုဆိုလိုသည်, အားကစားသမားကဤတ္ထုများယူပြီးရပ်တန့်ဖို့လာတဲ့အခါသိထား,” Geyer စောဒကတက်.
Geyer ရှိသမျှကိုအမှုပေါင်း WADA မှကူးစက်ခဲ့နှင့်နိုင်ငံတကာအဖွဲ့ချုပ်သက်ဆိုင်ရာနှင့်မျှမတို့အားကစားသမားရလဒ်တွေဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်ခဲ့ကြောင်းပြောပါတယ်, ပင် B-နမူနာတောငျး.
“ကျနော်တို့ကနေယူနမူနာ retest မှစတင်ခဲ့ပါတယ် 2009 ဖြတ်. 2011 ကျွန်တော်အပြုသဘောအမှုပြီးသားတွေ့ပြီ,” ဂျာမန်သိပ္ပံပညာရှင်ကဆက်ပြောသည်.
Geyer retesting သို​​့သော်ကိုယ်ခန္ဓာဖီဖာအုပ်ချုပ်နိုင်ငံတကာစက်ဘီးစီးကိုယ်ခန္ဓာ UCI နှင့်ကမ္ဘာဘောလုံးလောကပိုမိုအပြုသဘောရလာဒ်များပေါ်ထွန်းဘူးကပြောသည်, တူရကီအတွက်ထပ်မံခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမေတ္တာရပ်ခံခဲ့သော “လက္ခဏာတွေအများကြီးစောစောနှစျတှငျရှိကြ၏။ အကြောင်းမူကား,”
သူကအခြားအားကစားများအတွက်တိုးတက်မှုအတွက်စမ်းသပ်မှုများသတ်မှတ်ဘူး, အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအိုလံပစ်ကော်မတီပေမယ့် (IOC) မှအချို့သောနမူနာကြောင်းပြီးသားပြောဆိုကြပြီ 2006 တူရင်ဆောင်းရာသီအားကစားပြိုင်ပွဲမှာကြည့်ရှုခံခဲ့သည်.
ဤဆောင်ပါး, အားကစားပိုက်ကွန်ထဲမှာ steroids အသစ်စမ်းသပ် 260 လက္ခဏာ, ကအေအက်ဖ်ပီကနေစုစည်းတင်ဆက်သည်နှင့်ခွင့်ပြုချက်ဖြင့်ဤနေရာတွင် posted ဖြစ်ပါတယ်. မူပိုင်ခွင့် 2013 AFP သို့. မူပိုင်ခွင့်များရယူပြီး
← လွင်ပြင်စီးကရက် packets တွေကိုအားဖြင့်မိတ်ဆက်နိုင် 2015 ရဟတ်ယာဉ်တစ်စင်းကိုဖယ်ရှားသည်အဖြစ်စကော့တလန်သေဆုံးသူမြင့်တက်နိုင်ကြောင်း →